Sary sokitra De La Vega izay misarika ny hetsika voajanahary | Famoronana an-tserasera
Andro vitsivitsy lasa izay dia tao amin'ny Sary sokitra Wilkinson amin'ny alàlan'ny sambory ny hatsarana miavaka handeha amin'ny zoro hafa amin'ity famaizana ity ary manakaiky kokoa an'i Angela Mia De la Vega.
De la Vega no mahazo an'io miaina hatsarana zava-misy isika isaky ny sary sokitra varahina izay mitazona ireo fotoana manan-danja amin'ny fahazazan'ny ankizy. Azontsika atao ihany koa ny mamerina ny votoatin'ny fiarovana azon'ilay zazavavy kely ny rainy goavambe amin'ity fidirana ity hijanona ho mieritreritra mandritra ny segondra vitsy raha mbola vavolombelona ny asan'i De la Vega izahay.
Ho an'ity mpanao sary sokitra ity, ny kanto dia fotoana iray hisamborana izay mitranga manodidina azy, fomba iray hizarana amin'izao tontolo izao ny fahitany alohan'ny hanjavonany eo alohany. Ny repertoire-ny sary sokitra dia ahitàna tarehin-jatovo izay mirotsaka amin'ny angovo lehibe sy ny hetsiky ny ankizy feno.
Amin'ny fombany, izy mampiasa hazavana sy aloka ho fomba hahazoana aingam-panahy miatrika fifandraisana ara-pientanam-po eo amin'ny asany sy ny mpihaino azy, izay ahitanao ny ampahany amin'ny fiainana hita taratra amin'ireo endrika voasokitra tsara tarehy ireo.
Isaky ny azo atao, De la Vega miasa miaraka maodely tena izy afaka mamaritra manokana amin'ny antsipiriany tsirairay izay mahatonga ny asany ho voajanahary mampino. Noho io antony io ihany dia misafidy tsara ireo maodeliny izy hitadiavana endrika afaka mitahiry ny tsy mazava sy ny hamaroan'ny olombelona. Ny fizotrany amin'ny famoronana dia manomboka amin'ny taolana voalohany ka hatramin'ny farany. Na izany na tsy izany, rehefa mivoatra ny sombin-javatra, dia mamaritra ny isa tsirairay avy izay mamaritra izany sary voajanahary izany izay mampita ny fahatsapana ny fihetsiky ny mpijery.
Asa tsara ary eto ny tranonkalanao afaka manaraka ny sary sokitra maro be sisa tavela.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny fipoahan'ny angovo sy ny fiainana lehibe amin'ny sary vongana varahina De la Vega